Web Hosting Review: Avereno jerena ny fampisehoana farany Host Host & Misafidiana
Avy amin'i Jerry Low & Team WHSR
60+ Web Hosting Review & zava-misy haingana
Misy lafiny enina lehibe izay hojerentsika rehefa manombantombana ny mpampiantrano tranonkala: fampisehoana ny serivisy, ny lafin-javatra ilaina, ny fanohanana ny mpanjifa, ny fahatsinjovana ny mpampiasa, ny lazan'orinasa ary ny valin-tenin'ny mpampiasa voamarina, ary koa ny vidiny. Manangana tranokala fanandramana amin'ny orinasa mpampiantrano izahay ary mampiasa lisitra 80-point hanombanana ny kalitaon'ny serivisy fampiantranoana. Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny fomba hanombanana ny mpampiantrano tranonkala Eto.
Cloudways 25 GB TB 1 in-trano $ 10 / mo - WHSR10
TMDHosting manam-petra manam-petra cpanel $ 5.95 / mo 60 Days -
20i 10GB 50GB WordPress $ £ 4.58 / mo 30 andro -
WPWebHost 30 GB manam-petra plesk $ 9.00 / mo 100 Days APRILDEAL50
1 & 1 Hosting manam-petra manam-petra fanao $ 4.99 / mo 30 Days -
Kinsta 10 GB 20,000 mitsidika WordPress $ 25 / mo 30 andro -
MightWeb 10GB manam-petra cpanel $ 4.95 / mo 30 andro -
FastComet 15 GB SSD manam-petra cpanel $ 2.95 / mo 45 andro -
Temok 50 GB manam-petra cpanel $ 3.99 / mo 15 Days OLEG7513
ResellerClub Hosting manam-petra manam-petra cpanel $ 2.39 / mo 30 Days HOSTINGDEAL
Zyma Hosting 25 GB manam-petra cpanel $ £ 1.49 / mo 30 Days -
LiquidWeb 50 GB SSD TB 5 fanao $ 66.33 / mo - WordPress33
Host1Plus manam-petra manam-petra cpanel $ 4.50 / mo 14 Days -
Hostinger manam-petra manam-petra cpanel $ 3.99 / mo 30 Days Fikirakirana ny rohy
FastWebHost 20 GB manam-petra cpanel $ 2.95 / mo 30 Days Famerenana ny rohy
GoGetSpace manam-petra manam-petra cpanel $ 3.99 / mo 30 Days WHSR-SPECIAL2017
ScalaHosting manam-petra manam-petra fanao $ 6.95 / mo 30 Days -
ZeroStopBits 10 GB manam-petra cpanel $ 3.50 / mo 30 Days -
WebHostingHub manam-petra manam-petra cpanel $ 4.99 / mo 90 Days -
WebHostFace 20 GB SSD manam-petra cpanel $ 1.09 / mo 30 Days WHSRPC
StartLogic manam-petra manam-petra cpanel $ 5.99 / mo 30 Days -
SiteGround 20 GB manam-petra fanao $ 14.99 / mo 30 Days Famantaran'ny rohy - Ny mpampiasa vaovao promo
Pressidium Hosting 10 GB manam-petra WordPress $ 42 / mo 60 Days -
PowWeb manam-petra manam-petra cpanel $ 3.88 / mo 30 Days -
One.com 25 GB manam-petra cpanel $ 2.45 / mo 15 Days -
Omnis Network manam-petra manam-petra cpanel $ 5.95 / mo 30 Days -
Netmoly 10 GB manam-petra cpanel $ 5.95 / mo 45 Days WHSR
Miss Hosting manam-petra manam-petra cpanel $ 8.31 / mo 45 Days -
MidPhase manam-petra manam-petra cpanel $ 3.48 / mo 30 Days -
Tempolin'ny Media 20 GB TB 1 plesk $ 15.83 / mo 30 Days -
MDD Hosting 1 GB manam-petra cpanel $ 3.15 / mo 30 Days -
M3Server 30 GB TB 5 inhouse $ 15 / mo 30 Days WHSR20
LunarPages manam-petra manam-petra fanao $ 6.95 / mo 30 Days -
JustHost manam-petra manam-petra cpanel $ 7.95 / mo 30 Days -
IX Web Hosting - - - $ 2.95 / mo 30 Days (Link Activate)
iPage manam-petra manam-petra vdeck $ 2.49 / mo 30 Days (Link Activate)
InterServer manam-petra manam-petra cpanel $ 4.25 / mo 30 Days WHSRPENNY
InMotion Hosting manam-petra manam-petra cpanel $ 5.99 / mo 90 Days (Link Activate)
HostUpon manam-petra manam-petra cpanel $ 9.95 / mo 30 Days -
HostPapa manam-petra manam-petra cpanel $ 4.95 / mo 30 Days WHSR
Hostmonster manam-petra manam-petra cpanel $ 8.45 / mo 30 Days -
HostMetro manam-petra manam-petra cpanel $ 3.95 / mo 30 Days -
Hostgator manam-petra Unmetered cpanel $ 8.95 / mo 45 Days WHSRBUILD
Mpandrindra miloko 10 GB 1000 GB cpanel $ 9.30 / mo 5 Days NEWVPS
GreenGeeks manam-petra manam-petra cpanel $ 3.95 / mo 30 Days (Fikirakirana ny rohy)
GoDaddy manam-petra manam-petra cpanel $ 9.39 / mo 30 Days (Famerenana mivantana)
FatCow manam-petra manam-petra vdeck $ 4.08 / mo 30 Days -
eHost manam-petra manam-petra cpanel $ 2.75 / mo 45 Days -
DTS-NET 10GB manam-petra cpanel $ 0.63 / mo 60 Days WHSR
DreamHost manam-petra manam-petra fanao $ 8.95 / mo 97 Days WHSR25
Dot5 Hosting manam-petra manam-petra vdeck $ 5.95 / mo 30 andro -
Paradisa mananotena 30 GB manam-petra cpanel $ 10 / mo - -
CoolHandle manam-petra manam-petra cpanel $ 4.95 / mo 30 Days -
BlueHost 50 GB manam-petra cpanel $ 3.95 / mo 30 Days (Link Activate)
Arvixe manam-petra manam-petra cpanel $ 7.00 / mo 45 Days -
AltusHost 10 GB manam-petra cpanel $ 5.95 / mo 45 Days -
A2 Hosting manam-petra manam-petra cpanel $ 4.90 / mo 30 Days WHSR / SAVE63
* Fanambarana momba ny fahazoana: mahazo tamby amin'ny tranokalanay ny WHSR. Izahay dia mahazo karama rehefa manao fividianana amin'ny alàlan'ny rohy mankany amin'ny rohy ny mpampiasa anay.
Ahoana no fomba hisafidianana ny tranonkala mety?
Ahoana no ahafahantsika manapa-kevitra raha tsara ny mpampiantrano tranonkala? Mbola misy lanjany ve ireo fehin-taratasy mivalona sy ny fitehirizana kapila? Iza amin'ireo serivisy fampiantranoana no tokony alehanao?
Avelao aho hanampy anao hahita ny valin'ireo fanontaniana ireo sy ny maro hafa. Hanome lalana anao aho amin'ny alàlan'ny dia an-kianja iray manontolo hamaritana izay fantatrao tsara ny fomba hisafidianana ny fampiantranoana tranonkala mety.
Lisitry ny tranonkala fanalahidy
Be dia be ny antony tafiditra amin'ny famerenana sy ny fisafidianana tranonkala iray - izany dia mety hihoatra ny ankamaroan'ny olona. Ireto misy isa 16 tokony handalovana alohan'ny hampiasanao ny tranonkalanao vaovao.
Fantaro ny zavatra ilainao
Jereo ny faharetan'ny serivisy sy ny antoka antoka
Fametrahana safidy fampivoarana
Fanomezana nomena ny domain addon
Hazo fisitahana amin'ny vidin'ny fanavaozana
Politika refy sy fe-potoana fitsapana maimaimpoana
Fananana fampiantranoana tena ilaina
E-varotra e-varotra sy fanohanana
Fiaraha-monina momba ny tontolo iainana
Email hosting ([mailaka voaaro])
Live chat / telefona fanohanana
1. Fantaro ny zava-manahirana anao
Tsy afaka mahazo ny tranokalan'ny Internet mihitsy ianao raha tsy mahafantatra izay ilainao. Noho izany alohan'ny handehananao lavitra - mametraha ny zava-drehetra (ao anatin'ity toro-lalana ity izay vakinao) ary eritrereto izay tena ilainao.
Tranonkala manao ahoana no fanorenanao?
Maniry zavatra mahazatra (WordPress blog, angamba)?
Mila programa Windows ve ianao?
Mila fanohanana amin'ny script ianao (oh: PHP)?
Mila tranonkala manokana ve ny tranonkalanao?
Firy (na kely) azonao atao ve ny volanao amin'ny Internet?
Ireto ny sasany amin'ireo fanontaniana fototra tokony havalinao.
Ampiasao ao an-tsainao izay tadiavinao ny tranonkalanao amin'izao fotoana izao, ary manorena izany hevitra izany mandrapahatonganao imbetsaka 12 volana mialoha. Aza mieritreritra fotsiny izay tianao hanolorana, fa izay zavatra mety haniry na mila.
Izany dia mamely amin'ny toe-javatra iray tena tsotra. Firy ny loharano hilain'ny tranonkalanao? Raha toa ka mihazona blôgy manokana na tranokala madinika ianao, dia tsy azo atao ny mangataka ny fahafaha-manaon'ny mpampiantrano VPS.
Raha toa ianao ka mampiasa orinasa orinasa lehibe na manatanteraka hetsika e-varotra maro, dia mety ilaina ny VPS na mpizara voatokana mba hitantanana fitohanan'ny fifamoivoizana, ary koa amin'ny fahamatorana fanampiny.
Amin'ny fiafaran'ny andro, ny safidy tsirairay dia manana ny lanjany manokana sy ny endri-tsainy, na dia eo anivon'ireo sokajy roa amin'ny tranokalan'ny tranonkala izay nofaritako eto. Ilaina ny mendrika ny antsipiriany ary mifanaraka amin'izay takian'ny tranonkala.
Raha toa ianao tanteraka tanteraka ...
Ho an'ny vao teraka, ny fitsipika tsotra dia manomboka kely miaraka amin'ny kaonty fampiantranoana iombonana.
Ny kaonty fampiantranoana iombonana dia mora, mora ny mitazona, ary ampy ho an'ny ankamaroan'ny tranokala vaovao. Azonao atao koa ny mifantoka amin'ny fanorenana ny tranokalanao raha tsy manahy mikasika ny andraikitra hafa amin'ny serivera toy ny fiarovana ny tranokala sy ny fiarovana amin'ny serivisy.
Alos, satria ny tetikasa fampiantranoana izao dia azo henoina amin'izao fotoana izao, tsara kokoa ny manomboka kely ary manohy ny lalanao rehefa mihamaro ny fitomboan'ny fifamoivoizana. Ho sarotra kokoa izany ary hamela ny fahaizanao mitantana amin'ny fitantanana ny natiora amin'ny tranokalan'ny tranonkala.
2. Ny faharetan'ny Server / Uptime
Tsy misy zavatra manan-danja noho ny fananana mpampiantrano tranokala 24 × 7, rehefa afaka izany, ny mpitsidika anao dia mety ho tonga eo amin'ny tranokalanao avy amin'ny faritra misy eran-tany. Mila mpampiantrano tranonkala izay milamina ianao, eo amin'ny lafiny mpizara ary koa ny fifandraisan'ny tambajotra. Ny 99.95% dia raisina ho toy ny fenitra amin'izao andro izao, na dia amin'ny kaonty fampiantranoana ifampizarana; na inona na inona ambanin'ny 99% dia tsy azo ekena. Ny kaonty Premium dia matetika mirehareha amin'ny 99.99% na amin'ny fotoam-pandrosoana tsara kokoa.
Misy fomba maro samihafa hahazoana ny fampahalalana amin'ny tranokala mpampiantrano. Ny fomba tsotra indrindra hanaovana izany dia amin'ny mamaky ny famerenana ny fampiantranoana anay - aiza no amoahantsika ny rakitsary an-databatra isaky ny mandeha (jereo ny santionany etsy ambany).
Azonao atao ihany koa ny manara-maso ny tranokalan'ny web fantsona fanaraha-maso server - Maro amin'ireo fitaovana ireo no omena maimaim-poana, na farafaharatsiny farafaharatsiny. Mahomby sy mora ampiasaina izy ireo.
Ohatra: santionany amin'ny fotoana fohy navoaka tao amin'ny WHSR
Manantitrantitra be izahay amin'ny famerenam-panoloran-tena fampiantranoana, eto ambany ireo firaketana taloha izay nangoninay tamin'ny fampiasana Uptime Robot. Efa nandefa koa izahay HostScore (fitaovana fanaraha-maso efa mandeha amin'ny fiasana automatique) niverina tamin'ny volana septambra 2019, manoro hevitra aho ireo izay maniry firaketana tena amin'ny fotoana ambony.
SiteGround firaketana an-tsoratra (Src: SiteGround Hosting Review)
InMotion Hosting firaketana an-tsoratra (Src: InMotion Hosting Review)
3. Fanavaozana ny safidy Server
Misy karazany maro karazana mpizara fampiantranoana hita eo an-tsena: mizara, VPS, voatokana ary fampiantranoana rahona.
Ny fampiantranoana mizara matetika no safidy tsara indrindra ho an'ireo vao manomboka, bilaogera ary tompon'ny tranokala manokana satria izy no endrika web mora indrindra, mitentina $ 5 - $ 10 isam-bolana.
Miaraka amin'ny drafitra fampiantranoana mizara dia hizara ireo loharano mpizara anao amin'ny mpampiasa hafa ianao, izay midika hoe tsy andoavanao vola ny fampiantranoana satria zarain'ny mpampiasa hafa ny vidiny.
Iza no tokony hiaraka amin'ny fampiantranoana iombonana?
Amin'ny ankapobeny, raha mihinana kely noho ny mpitsidika 5,000 isam-bolana ianao dia tsara kokoa ny mandeha amin'ny fampiantranoana iraisana. Rehefa mitombo ny tranokalanao ary mahazo mpitsidika marobe ianao, dia mety te-hifindra amin'ny mpizara mahery vaika kokoa ianao.
Firaisan-kina iombonana: mora kokoa, mora ny mitazona; voafetra ny serivisy sy ny fahefana.
A Virtual Private Server (VPS) Hosting dia mitovy amin'ny fampiantranoana mizara fa mizara mpizara vatana iray. Ny fahasamihafana dia hoe manana ny loharanon'ny mpizara anao manokana ianao izay misaraka amin'ny mpampiasa hafa.
Miaraka amin'ny VPS fampiantranoana, raha ny tokony ho izy dia dingana avy amin'ny fampiantranoana mizara amin'ny resaka herinaratra sy ny hafainganam-pandeha fa mbola mora lavitra noho ny fahazoana ny mpizara manokana anao. Miankina amin'ny CPU sy ny fahatsiarovana (RAM) izay azonao, ny fampiantranoana VPS dia afaka mandany ny toerana rehetra eo anelanelan'ny $ 50 ka $ 200 isam-bolana.
VPS Hosting: Fanamafisam-peo bebe kokoa sy hery; pricier noho ny fampiantranoana iombonana.
Ny fampiantranoana ny Cloud dia mampifandray servisy an-jatony maro hiasa ho servisy goavambe. Ny hevitra miaraka amin'ny tranonkala fampiantranoana cloud dia ny fahafahanao manamaivana mora foana sy manatsara ny filan'ny serivisy rehefa ilaina izany.
Ohatra, raha miatrika tampoka tampoka amin'ny fifamoivoizana be dia be ianao, dia tsy mila miahiahy ny hidina ianao satria ny orinasa mpampiantrano dia afaka mametraka mora foana ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fanomezana loharano mpizara bebe kokoa.
Ny vidiny ho an'ny fampiantranoana rahona dia miovaova arakaraka ny fomba ampiasain'izy ireo amin'ny endriny iray karazana karama iray karama amin'ny vidiny.
Cloud Hosting: Tena mavesa-danja sy sarobidy tokoa; Hianatra fianarana henjana hanombohana.
Ny fampiantranoana mpizara dia ny rehefa manana mpizara ara-batana tanteraka izay natokana ho an'ny tranonkalanao. Tsy vitan'ny hoe manana fifehezana tanteraka ny loharanon'ny mpizara anao ianao fa tsy mila manahy momba ny tranokala hafa maka ny loharano ary manalefaka ny tranokalanao.
Ho an'ireo tranonkala izay lehibe kokoa sy manana fisehoan-javatra lehibe kokoa, ny serivisy iray voatokana dia ankatoavina amin'ny ankapobeny mba hifehezana ny haavon'ny fifamoivoizana. Ny saran'ny serivisy iray voatokana dia ambony lavitra noho ny fampiantranoana iombonana ary afaka manantena ny handoavana $ 100 sy ambony isam-bolana.
Dedicated hosting: Power server power and full control server; Mitaky fandaniana sy fahaizana avo lenta indrindra.
Ny mpampiantrano tranonkala mizara dia mahery ary matetika dia ampy ho an'ny mpampiasa vaovao. Raha manantena ianao fa hitombo haingana ny tranokalanao dia diniho ny hisintona a virtoaly manokana (VPS) na mpizara voatokana ho an'ny fampiasana hery bebe kokoa, fahabetsoana fahatsiarovan-tena, tahirin-tsarimihetsika, ary angamba fampivoarana fiarovana.
Ireo orinasa mpampiantrano famerenana mandalo izay manolotra safidy fampiantranoana efatra (Shared / VPS / Dedicated / Cloud) dia misy: A2 Hosting, InMotion Hosting, ary SiteGround.
4. Adiresy adiresy maro
Anarana mora ny nomena anarana - Sarotra be loatra amin'ny hoe matetika sarotra ny manohitra ny tsy manana mihoatra ny iray.
Izaho manokana dia manana anarana mihoatra ny 50 ao amin'ny kaontiko GoDaddy sy NameCheap - ary tsy irery aho. Araka ny ity fanadihadiana Web Hosting Talk ity - 80% amin'ny mpifidy mihoatra ny 5 sehatra ary mihoatra ny 20% amin'ny mpifidy mihoatra ny 50!
Mba hahafahana mametraka ireo sehatra fanampiny ireo dia mila efitrano fampiantranoana fanampiny isika. Izany no antony maha-manan-danja ny hananana kaonty fampiantranoana web izay mamela ireo domains maro.
Mitadiava tranonkala miaraka amin'ny sehatra adiresy 50 fanampiny
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny orinasa mpizara fandraisam-bahiny manana teti-bola dia mamela domains 25 addon * ao amin'ny kaonty tokana amin'izao fotoana izao saingy tsy azonao antoka mihitsy. Taona maro lasa izay dia tsy nitandrina aho ary nosoniavina tao amin'ny tranonkala iray izay mamela afa-tsy sehatra iray ihany. Indrisy, nitazona mihoatra noho ny valan-tserasera 10 aho tamin'io fotoana io. Aza averina intsony ny fahadisoako - jereo ny fahafaha-manaon'ny sehatr'asa alohan'ny hividiananao fividianana.
Useful Tip: Addon Domain = tranonkala voasitotra miaraka amin'ny sehatra samihafa izay azonao entina ao amin'ny tranonkala; Parked Domain = fanampiny domains azonao "park" ho an'ny famoaham-pandraharana domains na mailaka hosting.
Ny fifaninanana fampiantranoana, indrindra ho an'ny fampiantranoana iombonana, dia mora indrindra mandritra ny fisoratana anarana. Fantaro fa matetika ireo no mitranga avo lenta kokoa, koa mitandrema alohan'ny clicking 'mividy' amin'io planina io izay manolotra anao ho sonia ny vidin'ny 80% discount!
Ity dia fenitra indostrialy.
Raha tsy vonona ny hanohy hopitaly roa na telo isan-taona ianao, dia tsy misy fomba hisorohana ny vidin'ny fanavaozana ny vidiny.
Ao anatin'ny famerenan'ny mpampiantrano anay dia mampihena ny teboka ho an'ny mpampiantrano izay manakatra ny vidiny mihoatra ny 50% amin'ny fanavaozana. Saingy amin'ny ankapobeny dia tsy maninona aho amin'ireo orinasa izay manavao amin'ny vidin'ny fidiram-bolan'ny 100% - midika izany, raha misoratra anarana amin'ny $ 5 / mo ianao, dia tsy tokony hihoatra ny $ 10 / mo ny vidin'ny fanavaozana.
Mba hisorohana ny tsy ampoizina tsy ampoizina, tsidiho ny ToS ary ataovy azo antoka fa mahomby amin'ny fanavaozana ny sanda alohan'ny fisoratana anarana.
Useful Tip: Fomba iray haingana hanaovana izany dia ny manindry ny rohy ToS amin'ny takelaka ToSy (matetika amin'ny farany ambany pejy), tsindrio Ctrl + F, ary mikaroka ny teny fanalahidy "fanavaozana" na "fanavaozana".
Ampitahao: Signup vs Renewal vidiny
Mariho fa matetika ireo orinasa mpampiantrano izay mamoy ny vidiny amin'ny fisoratana anarana dia ireo izay manangona ny vidin'ny fanavaozana ny ankamaroany.
A2 Hosting $ 3.92 / mo $ 7.99 / mo + 100% Tsidiho ny Online
AltusHost € 4.95 / mo € 4.95 / mo Tsy misy fiovana Tsidiho ny Online
DreamHost $ 9.95 / mo $ 9.95 / mo Tsy misy fiovana Tsidiho ny Online
Hostgator $ 8.95 / mo $ 13.95 / mo + 56% Tsidiho ny Online
HostPapa $ 3.36 / mo $ 7.99 / mo + 110% Tsidiho ny Online
InMotion $ 3.99 / mo $ 7.99 / mo + 100% Tsidiho ny Online
InterServer $ 5.00 / mo $ 5.00 / mo Tsy misy fiovana Tsidiho ny Online
iPage $ 1.99 / mo $ 7.99 / mo + 300% Tsidiho ny Online
LiquidWeb $ 69 / mo $ 69 / mo Tsy misy fiovana Tsidiho ny Online
Pressidium $ 42 / mo $ 42 / mo Tsy misy fiovana Tsidiho ny Online
WP Engine $ 29 / mo $ 29 / mo Tsy misy fiovana Tsidiho ny Online
* Fanamarihana: Ny vidin'ny HostPapa sy InMotion Hosting dia miankina amin'ny fifanarahana manokana an'ny WHSR. Ny vidiny rehetra dia voamarina tsara tamin'ny Janoary 2019.
6. Politika refunda & vanim-potoana fitsapana
Tokony hisafidy ny hanafoana ny drafitra fampiantranoana ianao mandritra ny vanim-potoana fitsapana, manome antoka ve ny orinasa?
Inona ny politikan'ny volavolan-dalàna fampiantranoana rehefa tapitra ny fe-potoana?
Misy sazy fanafoanana na saram-bolana fanampiny?
Ireto misy fanontaniana fototra tokony homenao ny valiny alohan'ny hanaovana sonia.
Zava-dehibe ny mahafantatra ny fampidinana ny mpanjifa amin'ny fampiantranoana ny mpanjifa mba hahafahanao mandany vola be loatra raha tsy mandeha ny zavatra.
Misy orinasa maromaro mampiantrano ny saram-panajana avo latsa-panafahana rehefa manafoana ny kaonty ny mpampiasa mandritra ny fotoam-pitsapana. Ny torohevitsika? Aza avotsotra ireo mpikarakara fampiantranoana ireo! Amin'ny lafiny iray, ny orinasa fampiantranoana sasany dia manome antoka ny fotoana rehetra ahafahanao mangataka alalana hividianana famatsiam-bola rehefa vita ny fotoam-pitsapanao (tsara eh?).
7. Fananana fototra ao amin'ny tranonkala iray
Mazava ho azy fa ny zavatra sasany toy ny fitantanana rakitra sy antontan-tranonkala dia saika eo foana, fa ariho maso ihany koa ny ftp / sftp, installer iray tokana ary ny fitantanana DNS. Ary koa, tokony hisy mpitantana ny rakitra - ho azo antoka fa azonao atao ny manova ny rakitra .htaccess avy ao.
Kitiho ny Installer
Ny mpividy iray amin'ny kitendry dia tonga amin'ny tsiron-tsakafo isan-karazany, toy ny Softalucous or Simple Script.
Site dashboard SiteGround cPanel namboarina ka mora ny mametraka auto-fametrahana ny rindrambaiko malaza toy ny WordPress, PrestaShop, ary Joomla.
Na izany na tsy izany, ny tanjon'ny installer iray tsotra dia ny hahatonga ny fiainanao ho mora kokoa kokoa. Ireo dia karazana mpikarakara fametrahana izay manampy anao hametraka zavatra toy ny WordPress, Joomla, Drupal, na maro amin'ireo rindrambaiko hafa. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia mameno anarana sasantsasany ary angamba mametraka lahatahiry iray na eny an-dalana.
Ny fidirana FTP / SFTP dia tsy azo sarahina amin'ny fampidinana safidy goavana safidy. Ny andian-tafika sasany dia miezaka ny miala amin'ny tompony fotsiny, fa matetika dia voafetra ihany.
SSH fidirana ao amin'ny InMotion Hosting.
.taccess File Access
Ny rakitra .htaccess dia mahery vaika ary afaka manampy anao hanao fanovana ara-panjakana. Izy io dia mifehy ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fanamorana ny fanamorana ny tenimiafina sy ny fitantanana, ary dia tena ilaina amin'ny lafiny sasany amin'ny tanjonao ho avy.
Raha tsy hoe miditra amin'ny tranonkala manokana toy ny WP Engine sy Pressidium ianao (ireo mifantoka amin'ny WordPress fampiantranoana indrindra), ireo singa fototra ireo dia tsy maintsy manana. Tsy tokony hiaraka amin'ireo mpamatsy fampiantranoana izay tsy manome azy ireo ianao.
Ampitahao ireo endri-javatra manan-danja atolotry ny orinasa maro mpampiantrano mampiasa ny anay Fitaovana fampitahàna fampiantranoana. Ireto misy fampitahana tadiavina mahazatra hanombohanao -
Manao tranokala e-commerce ve ianao?
Mampiasa rindrambaiko fahitalavitra manokana ve ianao?
Mila mivezivezy amin'ny varotra ny tranokala ve ianao?
Mila fanampiana ara-teknika manokana ianao (ie ny Guide PrestaShop, na toy izany)?
Raha eny, dia zava-dehibe ho anao ny mifidy tranonkala iray manana fanohanana ampy momba ny e-commerce. SSL fanamarinana, tranokely manokana, ary fametrahana rindrambaiko sariohatra iray amin'ny sainam-peo dia sasantsasany amin'ireo endri-javatra tena manan-danja / fanampiana ilainao.
Vakio ny lahatsoratr'i Azreen 5 tsara indrindra fampiantranoana tranonkala ho an'ny orinasa madinika.
9. Fitaovana fanaraha-maso tsotra sy mora ampiasaina
Tena ilaina ny fanaraha-maso fanaraha-maso an-kalamanjana miaraka amin'ny sehatra maro, satria atidoha ny kaonty hosting anao.
Tsy maninona raha izany cPanel na Plesk na ihany koa ny tontolon'ny fanaraha-maso antoko fahatelo (toy ny atolotry ny GoDaddy), raha mbola mora ny mpampiasa azy ary tonga miaraka amin'ny fiasa ilaina rehetra. Raha tsy misy tontolon'ny fanaraha-maso mety dia tavela eo amin'ny famindram-pon'ny mpiasan'ny mpanohana teknolojia fampiantranoana ianao - na dia serivisy fototra aza ny rehetra ilainao.
Nanana tantara iray tamin'ny IX Web Hosting aho taloha, ary na dia tsy tompon-trano ratsy aza - IP maro be no voatokana amin'ny vidiny be indrindra, miaraka amin'ny fanohanana teknika lehibe - tsy maintsy nesoriko ny kaontiko satria tena mpampiasa azy ny ordinatera.
Fanaraha-maso ampiasaina amin'ny tranonkala hafa
10. Fanavotana amin'ny kaonty: Inona avy ireo fetra?
Ity misy tendron-vola izay tsy holazain'ny ankamaroan'ny tranokala famerenana: Ny orinasa mpampiantrano dia hisintona ny plug ary hampiato ny kaontinao raha mampiasa fahefana matanjaka loatra ianao na manitsakitsaka ny fitsipika.
Ny zava-misy amin'ny fampiantranoana tsy voafetra
Mety efa nahita ilay teny hoe "Hosting Host" tsy voafetra ianao amin'ny sasany amin'ireo mpizara tranonkala malaza. Ny fampiantranoana tsy manam-petra dia baiko iray ampiasaina amin'ireo mpamatsy fampiantranoana maro mifampizara mba hamaritana ny fahafahan'izy ireo mandefa ny tahiry tsy manam-petra sy ny bandwidth.
Indrisy anefa, Ny vahaolana amin'ny haino aman-jery tsy manam-petra dia voafetra be kokoa noho ny eritreritrao.
Ity no zavatra, drafitra "Tsy voafetra ny fampiantranoana" dia tsy voafetra ihany rehefa mampiasa kely noho ny loharano azon'ny mpizara azonao ianao.
Mifanohitra amin'ny finoana malaza, ny bandwidth ary ny habaka fitehirizana dia tsy ny volan'ny orinasa ihany no voafetra. Fa kosa, izany ny CPU sy fitadidiana izay napetraka miaraka amin'ny fetra.
Ohatra, ny tranokala iray miaraka amin'ny mpitsidika 5,000 isan'andro dia mety tsy hahazaka ny fifamoivoizana raha misy fetra ny fahatsiarovana sy ny herin'ny CPU, na dia eo aza ny fahazoana mombamomba ny mpizara.
Tsy mety amin'ny orinasa ny mametra ny fetra amin'ny fifandraisana daty miakatra na ny isan'ny tsingerin'aratra azon'ny kaonty ampiasaina, ao amin'ny ToS.
Mitovitovy amin'ny bufet-rehetra azon'ny sakafo azafady, ao anatin'izany, ny mpamatsy fampiantranoana dia manome anao malalaka ny loharanom-bola "tsy voafetra" fa hampiasa vola mety fotsiny ianao.
Ny devoly dia amin'ny antsipiriany
Raha misy fetra ny drafitra "tsy voafetra" dia mbola avo lenta ihany. Ny famakiana ilay pirinty tsara amin'ny Terms of Service (ToS) ao amin'ny orinasa no hanome anao ny famaritana mazava kokoa ny fetran'izy ireo amin'ny serivisy fampiantranoana tsy voafetra. Holazaina aminao ianao any amin'ny toerana sy ny fepetra izay mety anaato ny kaontinao na ajanonana noho ny fampiasana ny loharanom-pitaovana loatra - matetika izy ireo dia tsy hilaza aminao hoe ohatrinona. Azo antoka koa fa saika ny mpampiantrano tranokala rehetra dia tsy handefitra amin'ny fampiantranoana rakitra sy / na serivisy tsy ara-dalàna. Ka raha mikasa ny hanao tranokala iray ianao hahafahan'ny olona misintona rakitra piraty, dia mety ho tsara vintana amin'ny ampahany betsaka ianao.
Manampy anao hahalala zavatra roa ny fahafantaranao ny fetran'ny kaontinao -
Ny fahalalahan-tanana (na kahihitra) dia ny solontenan'ny tranonkala fohy misy anao - Tokony hiaraka amin'ireto iray ireto ve ianao, na ny tompona hafa miaraka amin'ny fameperana maivana?
Tena mampivelatra ny orinasa fampiantranoana anao - Azonao itokisana ve ireo teny avy amin'ny orinasa mpampiantrano anao? Ny orinasa tompona tokantrano dia manana torolalana tena mazava momba ny famerana sy ny fepetran'ny tolotrasa.
Ohatra: iPage TOS
Ohatra, eto ny voasoratra tao amin'ny iPage's TOS - mariho ireo fehezanteny voafaritra.
Manaiky ny mpampiasa fa tsy mampiasa mpampiasa be loatra ny fanodinana CPU amin'ny mpampiasa mpizara iPage rehetra ny mpampiasa. Ny fanitsakitsahana an'io politika io dia mety hiteraka fanitsiana amin'ny iPage, ao anatin'izany ny fanombanana ny fiampangana fanampiny, ny fanilihana na ny fanesorana ireo Serivisy rehetra, na ny fampiatoana an'io fifanarahana io, […]
Vakio ny famerenana iPage feno
11. Fiaraha-monina momba ny tontolo iainana
Ny tranonkala iray mpikaroka dia manana ny fiahiahiana voalohany amin'ny webmasters
Araka ny science studies, mpampiasa tranonkala amin'ny antsalany dia mamokatra mihoatra ny 630 kg amin'ny CO2 (izay be dia be!) ary mandany ny 1,000 KWh isan-kerinandro. A green web host Etsy andaniny kosa, dia mamoaka ny CO2 zero. Tena misy fahasamihafana goavana eo amin'ny mpanolotra aterineto maitso sy ny mpiantrano web tsy ekolojika.
Raha mikarakara ny tontolo iainana ianao ary maniry ny hampihenana ny dingam-piaramanidina natolotry ny orinasanao na ny tenanao, dia makà mpanamboatra tranonkala iray izay mandeha amin'ny angovo azo havaozina (na farafaharatsiny, tranonkala iray manidy ny fanjifana angovo avy amin'ny mari-pamantarana maitso).
Torohevitra mahasoa: Betsaka ny orinasa mpampiantrano mampiasa ny "paikady marketing maintso" taona vitsy talohan'izay fa toa tsy dia milamina izao. Miorina amin'ny fanamarihako dia ny Greengeeks dia iray amin'ireo vitsy izay mavitrika maintso (jereo ny lisitra GreenGeeks 'EPA Green Power Partner eto).
Natomboka tamin'ny 2008 ny GreenGeeks. Ny tatitra farany nalefany tamin'ny EPA dia tamin'ny Jolay 2016 (loharano).
12. [mailaka voaaro]
Raha te-hanangona kaonty mailaka miaraka amin'ny tranokalanao ianao, dia tokony hijery ireo endri-tsainao alohan'ny fisoratana anarana. Ny orinasa maro mpampiantrano dia ho avy amin'ny fahafahana mitantana ny mailakao manokana (zavatra toy izany [mailaka voaaro]) fa hey, tsaratsara kokoa hatrany ny manamarina sy mahazo antoka izany, eny?
Raha toa ka tsy nomena ireo endri-tsoratra e-mail, dia tsy misy fifanarahana lehibe. Misy fomba maromaro ahafahanao manana kaonty mailaka amin'ny sehatranao manokana. G Suite, ohatra, dia tolotra iray atolotr'i Google izay hamela anao hanana ny mailakao manokana, atolotra ho an'ireo servers. Manomboka amin'ny ambany ka hatramin'ny $ 5 isaky ny mpampiasa azy isam-bolana.
Useful Tip: Fantaro ny fomba hananganana ny mailakao manokana ary hahita ny mailaka hosting eto.
13. Fe-potoan'ny famandrihana
Aza gaga raha mahita ny tranonkala sasany manery ny mpanjifany hanaiky fifanarahana lava be. Ny lunarpages, ohatra, dia nanova ny rafitra fanontam-pirintiny tamin'ny volana 2009 ary nanampy ny mpanjifa handray ny fifanarahana fifanintsanana 5 taona mba hahazoana ilay fifanarahana $ 4.95 / mo. Tsy manolotra fifanarahana tahaka izao intsony ny fiaramanidina amin'izao fotoana izao fa mbola azo atao ihany ny ohatra.
Tokony hanao fanekena fifanaraham-potoana ve ianao? Ny valinteninay dia tsia - Aza misoratra anarana amin'ny web ho an'ny fotoana maharitra mihoatra ny roa taona, raha tsy manolotra mazava izy ireo amin'ny fotoana rehetra vola antoka ho antoka.
Useful Tip: Ny orinasa mpampiantrano matetika dia manome tolotra tsara kokoa rehefa mizara fotoana maharitra ireo mpampiasa. Ny fihenam-bidy dia lehibe; saingy manoro hevitra ny mpampiasa aho mba tsy handoa onitra mihoatra ny 2 taona. Mivoatra haingana ny teknôlôjia ary mety hahita ny zavatra ilainao ny hafa amin'ny fotoana fohy.
Ny fianjeran'ny ordinatera, ny fitaovana tsy mahomby, dia ireo zava-misy eo amin'ny fiainana, toy ny fahafatesana sy ny hetra. Ny tranokalanao dia mety ho mora ihany koa amin'ireo trangan-javatra ireo, na angamba mpankahala iray miditra ao amin'ny WordPress bloganao ary manolo ny antontan-taratasinao index.php. Angamba ny tambajotra manontolo dia nuked.
Raha ny tranokalan'ny tranonkala dia mamerina famandrihana maimaim-poana, dia tsy misy zavatra tokony hanahy mikasika ny fisehoan-javatra toy izao. Ny mpamatsy mpampiantrano dia tokony hamerina hamerina amin'ny laoniny tanteraka ny tranonkalanao manontolo na farafaharatsiny.
Amin'ny backups, misy fanontaniana vitsivitsy vitsivitsy hangatahana ny mpampiantrano anao:
Manome fanafody feno ve ny mpamatsy Internet anao?
Afaka mamerina manamboatra amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ve ny ordinatera?
Azonao atao ve ny mamorona loham-pamokarana amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny cron asa na programa hafa?
Afaka mamerina amin'ny alàlan'ny tenanao mora foana ve ianao, ka tsy voatery miandry ny mpiasa an-tsokosoko hanao izany ho anao mandritra ny fotoan'ny fahasitranana amin'ny loza?
Useful Tip: Lozam-pifaneraserana amin'ny tranokala manana fitaovam-piarovana lehibe tsy misy vola hafa A2 Hosting (ho an'ny drafitra Swift sy ambony), Web Host Face (ho an'ny drafitra fanampiny sy ambony), TMD Hosting, Hostinger, ary SiteGround.
15. Live Chat na telefona fiantohana
Tiako raha te hifanaraka amin'ny telefaona sy ny orinasan-tranonkala miaraka amin'ny antontan-taratasy maromaro aho (mba hahafahako mamaky sy mamaha ny olako ihany).
Saingy ahy izany. Azonao atao ny mividy mailaka na fanohanana an-telefaona.
Amin'ny farany, tianay hisy olona afaka manery anay mpanolotra fiainana avy hatrany raha toa ka mibitsika ilay bokotra SOS izahay.
Izaho dia nanandrana 28 fampiantranoana mivantana ny chat chat tamin'ny taona 2017 - SiteGround, InMotion Hosting, Web Host Face, WP Engine, ary Go Get Space dia nipoitra ho mpandresy amin'ity fitsapana ity.
Screenshots amin'ny rakitsariko mivantana ao amin'ny WebHostFace. Ny valim-panadinako dia valiana anatin'ny segondra, ary ny valin'ny fanontaniako dia namaly tamim-pahaizana. Ny traikefa ankapobeny miaraka amin'ny mpiasa mpanohana ny tranonkala dia tena tsara. Vakio ny tsipirian'ny WebHostFace amin'ny antsipiriany.
SiteGround - mahavariana system chat supportand ary tena mahasoa ny mpiasa mpiasa manohana. Traikefa tsara amin'ny ankapobeny. Vakio ny tsipika momba ny SiteGround.
16. Ny fandraisana andraikitra an'ny mpizara / ny fampiantranoana fampiantranoana tranonkala
Tsy midika akory izany raha mamaly haingana na tsia ny orinasa fampiantranoana anareo! Ny valim-pamantaran-tarehy dia fepetra amin'ny fotoana ilàna azy rehefa misy olona iray hitsidika ny fidirana amin'ny anaranao eo amin'ny sehatr'asa, mandra-piaiky ny mpamaky izany fangatahana izany.
Matetika ny Time to First Byte (TTFB) dia mihoatra lavitra noho ny fahafaham-po amin'ny alàlan'ny fananana tranokala haingana indrindra. Voamarina fa efa ela ny mpampiasa iray dia miandry tranokala iray entina halefa, izay mety havelany hiala ao amin'ilay tranokala alohan'ny hamaranana azy.
Ny haavon-tseraseran'ny tranonkala koa dia misy fiantraikany amin'ny fomba amam-panao ny Google sy ny fitaovam-pikarohana hafa amin'ny valin'ny fikarohana
Tsy dia fahita firy ny orinasa fampiantranoana ao amin'ny Internet. Fitsipika iraisana iray matetika dia sarany. Ny fitaovam-pitaterana an-tariby sy ny fotodrafitrasa dia tsy tonga mora. Raha afaka manome alalana ny $ 2 isam-bolana ho an'ny fampiantranoana ny mpampiantrano anao, dia manjary kely ny trondro.
BlueHost vao haingana fanandramana - ny habaka fitsapana dia niverina tamin'ny baiko voalohany tamin'ny 488ms. Vakio ny tsipiriany momba ny BlueHost.
Soso-kevitra ilaina: Mampiasà fitaovana toy ny Byte Check, Bitcatcha, ary Page Test Test mba hitsapana haingana ny tranokala ho anao.
Fanoratana: Samy manana ny filana samy hafa ny tranokala rehetra
Ny zavatra dia - "tsara indrindra" foana dia fe-potoana iray mifandraika. Tsy misy vahaolana maharitra ho an'ny filàna tranonkala iray.
Tsy nety aho free web host raha manomboka tranokala e-commerce lehibe ianao. Tena tsy nety aho adiresy lafo WordPress raha mihazakazaka bilaogy fialamboly kely ianao.
Samy manana ny filàna samihafa ny tranonkala samihafa. Ny hany ilainao dia ny mpamatsy tolotra mety mampiantrano ny tranonkalanao.
Tsy momba ny fikarakarana ny mpampiantrano tranonkala tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao; Aleo kosa mitady ny tranonkala RIGHT ho anao.
Ary eo, manana izany ianao - mpitari-tolotra mpiantsena tranombarotra. Manantena aho fa manamaivana ny fizotran'ny mpampiantrano anao kely fotsiny izany. Vantany vao vitanao ny mpampiantrano anao dia vonona ny hamorona sy hametraka ny tranokalanao amin'ny Internet!
^ Miverina any amin'ny lisitra fizahana fifantina ny mpampiantrano tranonkala
Ahoana ny fiasan'ny famandrihana fampiantranoana?
Mampiasa lisitra fanamarinana 80 momba ny fanombanana mpizaha tranonkala izahay.
Tsindrio eto raha te hahafantatra ny fomba hanombohanao ny mpampiantrano tranonkala.
Torolàlana momba ny fividianana tranonkala bebe kokoa
Mpampiantrano tranonkala tsara indrindra: 10 tery farany
Serivisy fampiantranoana mora indrindra any an-tsena
Fifandraisana an-tranonkala haingana indrindra
Hosting tsara indrindra ho an'ny asa aman-draharaha
Hosting tsara indrindra ho an'ny mpanoratra
Hosting tsara indrindra ho an'ny tranonkala manokana
Web Host latabatra latabatra
Lisitry ny lisitra fisafidianana ny mpampiantrano tranonkala
1- Fantaro ny filàna fampiantranoana anao
2- Hamarino ny fahatokisan'ny mpizara
3- Safidy fampiantranoana
4- Nomeran'ny domain addon
5- Vidin'ny vidin-tserasera amin'ny vidin'ny fanavaozana
6- Polisy refund ary fotoam-pitsarana maimaim-poana
7- Endri-javatra fampiantranoana tena ilaina
8-e-varotra endri-javatra sy fanohanana
9- tontonana fanaraha-maso fampiantranoana
10- Famerana ny kaonty
11- Tia namana
12- Email fampiantranoana ([mailaka voaaro])
13- fe-potoana famandrihana
14- backup backup
15- Fanohanana mivantana / an-telefaona
16- Fandraisana andraikitra ny mpizara